Batwing လက်ရှည် V-Collar ချည်သား ၀ တ်စုံ ၀ တ်စားဆင်ယင် ၀ တ်ဆင်ရန် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းကင်း ၀ ယ်ပါ WoopShop®
Batwing ၀ တ် V-Collar ၀ တ်စုံအဆင်သင့် ၀ တ်စားဆင်ယင်
$40.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $68.99
အရောင် စပျစ်ရည်ကိုအနီ ကလေးအပြာ ရှေ အနီရောင်ခရမ်းရောင်
စပျစ်ရည်ကိုအနီရောင် / တစ်ခုမှာအရွယ်အစား ကလေးအပြာ / တစ်ခုမှာအရွယ်အစား ရွှေ / တစ်ခုအရွယ်အစား အနီရောင်ခရမ်းရောင် / One Size ကို
Batwing လက်ရှည် V-Collar ချည်သား ၀ တ်ရှပ် - ဝိုင်နီ / One Size backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အလေးချိန်: 0.363 ကီလိုဂရမ်
One Size (ယူနစ် - စင်တီမီတာ)
Raglan လက်: 57
29 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
စိတ်ဝင်စားဖွယ်စားဆင်ယင်။ ရုံသစ်ကိုတစ်နှစ်။ အားလုံးချဉ်းကပ်အကြံပြုပါသည်။ ရှည်လျားသောပေးပို့ပေမယ့်ဆိုင်ရဲ့အမှားအားဖြင့်မဟုတ်
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စားဆင်ယင်, အလွန်! အရည်အသွေးကောင်း! အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!